Man'eewwan gulaaltu dabalataa irraa ittisuuf,sanduuqni mirkaneessaa Kan Eegameefuula caancalaa Dhangii - Man'eewwwan - Eeginsa Man'ee ykn baafata halqara irraa Dhangii Man'eewwan mirkaneessuun dirqi dha.
Man'eewwan hin eegamin fili
Dhangii - Man'eewwan - Hayyisa Man'eefili.Sanduuqa Kan Eegame hin mallatteessin itti ansuun Eeyyeecuqaasi.
Ittisni wardii baafata halqara caancaloota wardii kan argii gadiitti argamaniis ni dhiibbeesssu.Ajaajni Haqii fi Siiqsi/Garagalchi filamuu hin danda'aan.
Yoo wardiin ittifamee,akkaataalee man'ee haroomsuu ykn haquun hin dandeessu.
Takka ol keenyaan,barruuwwan ittisaman ajajaFaayilii - Akkaa olkaa'iqoofa lammata olka'aamu.
Title is: Wardii Eegaa